OCEANVIEW CONDO, 1/1 for 4, LARGE PATIO - I-Airbnb
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Valerie
U-Valerie uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-95% wezivakashi zakamuva.
AMAKHAYA ETHU AFAKWA NGE-ULTRAVIOLET SANITIZING A/C LIGHT SYSTEMS, UKUHLANZA MANJE KUTHUTHUKISIWE NGENXANISO EYENGEZIWE EBUHLENI FUTHI UZIBHEKE NGOKUFAKA Okungenakhiye.
Leli gumbi lokulala elilodwa, i-condo eyodwa yokugezela lisesitezi sesi-2 nokubukwa okumangalisayo kolwandle nolwandle. Igumbi lokulala linombhede ongu-1 olingana nenkosi kanye ne-TV yesikrini esiyisicaba. I-TV yesikrini esiyisicaba egumbini lokuhlala sinephakheji yekhebula ethuthukisiwe futhi kukhona i-WIFI yamahhala kulo lonke. Kukhona umbhede kasofa olingana nendlovukazi egumbini lokuphumula. Ikhishi likuhlomele ngokuphelele ukupheka kanye nokudla. Indawo yokudlela yabangu-4. Ngaphandle nje kunesitezi esikhulu sesitezi sesi-2 esinokubukwa okuhle kolwandle. I-condo itholakala nje ngezinyathelo eziya endaweni ehamba phambili eHollywood Beach neBroadwalk edume umhlaba wonke. Indawo yokupaka ifakiwe emotweni eyodwa futhi itholakala ngemuva kwesakhiwo. Izihlalo zasolwandle namathawula olwandle ahlinzekwa endlini.
Imibhede yomoya eyengeziwe, i-Pac & Plays nezihlalo eziphakeme ezitholakalayo lapho ucelwa, ngenkokhiso engu-$25. I-Hollywood Beach ikhethwe njengomunye "Wamabhishi Angcono Kakhulu Emindeni" e-Florida yi-Fodor's Travel Guides futhi iwukuphela kolwandle kuzo zonke izifunda ze-Broward ne-Miami-Dade elizoqashelwa ngesihlabathi salo sekhwalithi nezinsiza. Qasha ibhayisikili ihora, usuku noma isonto futhi ujabulele uhambo oluhle eduze kolwandle olusanda kulungiswa i-Broadwalk, indawo yabahamba ngezinyawo yaseHollywood engamamayela angu-2.5 eyakhiwe amakhefi abukekayo, izindawo zokudlela nezitolo. Gxumela itrolley uye e-ArtsPark eDowntown Hollywood ukuze ubambe umbukiso ophephetha ingilazi futhi ulalele isihlahla se-baobab esilandelwa isikhathi esithile esichithwe ekudlaleni kwezingane nomthombo osebenzisanayo ojabulisa izingane ngokuqhuma okujabulisayo kwamanzi kanye nenkundla yokudlala eklanyelwe vuselela ubuhlakani.
Qasha ku-Professional Vacation Rental Manager ukuze ujabulele iholide elihle, i-ValGal Vacation Rentals enesipiliyoni seminyaka engu-10 endaweni. Siyatholakala 24/7 nganoma yisiphi kanye nazo zonke izidingo zakho zasekhaya leholide. Leli khaya linakho konke ngesilinganiso esihle sesethulo, BUKA MANJE ukuze uhlangabezane nazo zonke izidingo zakho zeholide. Ngeshwa, Awekho Amaloli noma Ama-Campers avunyelwe ukupaka endaweni Yokupaka yase-Chateau Garden's.
4.56 · 43 okushiwo abanye
IHollywood Beach edumile emhlabeni wonke kanye ne-Boardwalk kuseduze kwakho nezindawo zokudlela eziningi, izitolo kanye nezindawo zobumnandi ezivulekile ezinomculo obukhoma. Uhambo olufushane nje ukusuka endaweni entsha enhle yaseMargaritaville Resort kanye neHollywood Beach Bandshell lapho iMargaritaville isingatha umculo obukhoma wasebusuku.
Amamayela angu-2 ukuya e-Dania Beach nase-Dania Beach Pier.
Amamayela ayi-6 ukuya eFort Lauderdale/Hollywood International Airport.
6 miles ukuya ePort Everglades.
Amamayela ayi-8 ukuya eDowntown Fort Lauderdale kanye neLas Olas Boulevard kanokusho enezitolo nezindawo zokudlela ezinhle.
Amamayela angu-2 ukuya eDowntown Hollywood enezitolo, izindawo zokudlela, imigoqo namaklabhu wasebusuku.
Amamayela angu-5 ukuya e-Hard Rock Casino kanye ne-Resort.
Imizuzu engama-20 kuye kwengama-30 ukuya eDowntown Miami, Lincoln Road, Miami Beach, kanye naseMiami International Airport.
Le ndawo futhi inokufinyelela okulula ku-I-95/595 / Florida Turnpike
Ukuphatha kutholakala KU-NEARBY kuzo zonke izidingo zakho. I-Pac n Plays, izihlalo eziphakeme kanye nemibhede yomoya nakho kuyatholakala mahhala. Siyatholakala amahora angu-24 ngosuku izinsuku ezingu-7 ngesonto ukuze sinakekele noma yiziphi izidingo.
Ukuphatha kutholakala KU-NEARBY kuzo zonke izidingo zakho. I-Pac n Plays, izihlalo eziphakeme kanye nemibhede yomoya nakho kuyatholakala mahhala. Siyatholakala amahora angu-24 ngos…
Izilimi: English, Español, Українська